5-ta kulan ee ugu fiican madal Android | Androidsis
5-ka kulan ee ugu fiican madal Android
Mid ka mid ah qaybaha ugu xiisaha badan ee la ciyaaray Play Store ayaa ah cinwaannada madal. Haddii aadan aqoon waxa ay yihiin, waxay ku saabsan yihiin ciyaaro hal dabeecad-ama dhowr ah, ay si tartiib tartiib ah ugu dhex mari karto heerar ama adduunyo, iska ilaalinta caqabadaha iyo / ama baabi'inta iyo la dagaallanka cadowga. Qaar ka mid ah tusaalooyinka caanka ah waxaa ka mid ah cinwaannada Mario Bros on consoles'ka kala duwan, labada desktop iyo la qaadi karo.
Fursadan waxaan ku soo uruurinaa 5-ta kulan ee ugu fiican madal ee maanta ka jira Google Play Store dukaamada casriga ah ee Android. Dhammaan kuwa aan ku liis gareyno qoraalkan uruurinta waa bilaash, waxaa xusid mudan, marka lagu daro ahaanshaha sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu caansan, la soo dejiyey oo lagu raaxeystay dukaanka.
Hoos waxaad ka heli doontaa taxane ka mid ah 5-ta kulan ee ugu wanaagsan ee moobilada Android. Waxaa xusid mudan, sida had iyo jeer aan yeelno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood. Si kastaba ha noqotee, hal ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale helitaanka walxaha, abaalmarinno iyo abaalmarinno. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Dunida Lep
3 Dan Ninka - Dagaal iyo Feer
4 Seef Of Xolan
Sidee ugufiican ee loobilaabo liiskan ciyaar ina xusuusinaysa inbadan oo caan ah oo ka tirsan Nintendo? Iyo iyada oo su'aashan xasaasiga ah hawada loo tuuray, waa in sidaas la dhahaa Dunida Lep waa mid ka mid ah cinwaannada ugu caansan ee loo yaqaan 'Play Store for Android', oo waxba maahan, maxaa yeelay waxaan wajaheynaa ciyaar sifiican loo guuleystey oo soo bandhigeysa mowduuc aad u xiiso badan oo ku xiran qaar ka mid ah sawir gacmeedyo kartoon ah oo aad u kacsan iyo adduunyo badan oo caajis ka dhigaya inaanay weligood joogin.
Ka caawi Lep inuu helo oo ururiyo dhammaan lacagta dahabka ah ee suurtagal ka ah heer kasta, laakiin ha u oggolaan in cadaawayaasha gaarka ah iyo xayawaannada ka muuqda halkaas ay baabi'iyaan ujeeddadiisa. Waxaa jira in ka badan 160 heer oo la ogaado Iyo, inkasta oo xarfaha bilowgu yihiin kuwo aad u fudud, hadana arrimuhu way isku murmayaan, maaddaama ay bilaabeen inay si dhib yar u sii socdaan. Blurgg, Long John, Super Sam iyo Colleen waa qaar ka mid ah 8-da astaamo ee aad ciyaarta ku leedahay, mid walbana wuxuu ciyaarayaa doorar sida burcad-badeed, aalado, zombies iyo inbadan. Waxa kale oo jira guulo dhawr ah oo lagu dhammaystirayo Lep's World oo kaa ilaalin doonta dareenkaaga dhammaystirka dhammaan 6-da adduun iyo heerar badan sida ugu fiican.
LEP ee World
SEGA waxay muujineysaa tixgelinteeda ciyaartoydii hore iyo magacyada sheekooyinka, sida Sonic The Hedgehog 2 Classic, oo ah ciyaar hore oo hadda sifiican loogu habeeyay taleefannada casriga ah ee Android. waana in cinwaankan barxadda lagu ciyaari karo 60 FPS (wareegsan ilbiriqsi kasta) oo aan lahayn sawir qalloocan. Waa jawharad run ah oo loogu talagalay kuwa jecel ciyaaraha Sonic, shaki la'aan.
Ciyaartan, hedgehog caan ah oo caan ah waa inuu ka adkaadaa adduunyo iyo heerar badan, caqabado isku dayi doona inay ka hortagaan sababtiisa iyo boqollaal qadaadiic ah oo uu isagu soo uruurin doono si ay u noqdaan kuwa ugu fiican dhammaan. Dabcan, xawaare waa halyeeyga ee kulankaan, maxaa yeelay waa inaad u isticmaashaa inaad ku hormariso heerarka oo aad markaa la kulanto Eggman, Shisheeyaha caanka ah ee ka soo horjeedka Sony adduunka oo markan isku dayaya inuu helo toddobada Chaos Esmeralds si loo dhiso oo loo dhammaystiro hub xumaan iyo kama dambays ah oo qof walba khatar ku ah.
Waxaa sidoo kale jira hababka ciyaarta kala duwan, sida tijaabada waqtiga, taas oo ah inaad la dagaallanto waqtiga oo aad ku guuleysato ujeeddada loo baahan yahay. Waxa kale oo jira qaab khadka tooska ah ah iyo qaab weerar madaxeed, kaas oo ay tahay inaad la kulanto cadawyo adag. Intaa waxaa dheer, Mecha Sonic wuxuu ku jiraa cinwaankan, sidaas darteedna wuxuu yahay tartan kale oo weyn oo asalka Sonic laftiisa ah. Sidoo kale, waxaad kaloo leedahay Dabo iyo Koobab, laba ka mid ah saaxiibada Sonic oo ka caawin doona safarkiisa iyo la dagaalanka sharka. Waxa kale oo aad leedahay kartiyo cajaa’ib leh haddii aad hesho dhammaan Chao Esmeralds ciyaarta.
Dan Ninka - Dagaal iyo Feer
Kulan kale oo madal weyn oo loogu talagalay Android waa Dan Man - Dagaal iyo feedh. Xaqiiqdii, waxaan uga hadalnay tan boostada uruurinta ee aan dhowaan daabacnay, taas oo ku saabsan Ciyaaraha khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ee casriga casriga ah ee Android, ahaansho Ciyaar kale oo weyn oo la ciyaaro marka aad ku sugan tahay meelaha aysan ka jirin caymiska xogta moobiilka iyo Wi-Fi.
Cinwaankan feedh iyo dagaal looma arko maqnaanshahooda, tanina waa wax aan si fudud oo dhakhso leh uga soo qaadan karno magaceeda. Waa ciyaar la wada ciyaari karo kaligood iyo saaxiibkood, maadaama ay leedahay xulasho ciyaartoy badan. Iyo haddii aadan lahayn saaxiibo, markaa waxaad la jaan qaadi kartaa qof kasta oo ku jira xulashada ciyaarta degdegga ah. La dagaallama ciidammada askarta, aalado iyo madaxyo madax-bannaan ku biimayn hal abuur leh caqabado badan oo isku dayi doona inay kaa horjoogsato inaad gaarto yoolkaaga ugu dambeeya, oo ah inaad la dagaallanto kuwa ugu waaweyn.
Uma isticmaali kartid oo keliya feedhahaaga inaad garaacdo, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa hub iyo farsamooyin dagaal oo kala duwan oo ka dhigaya Dan The Man - Dagaal iyo Feedhida ciyaar aad u xiiso badan oo aan sinnaba loo odhan karin. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay muuqaallo aad u xeel dheer iyo animations sameeya waa cinwaan madal xiiso leh oo la fiirinayo, sameynta taabasho gadaal ah oo qarsoodi ah. Hadana hadaan ku darno codka, kaas oo sheekada kugu xiraya, maxaa yeelay waxaad leedahay ciyaar aad ku disho caajis waa hawl fudud.
Dhinaca kale, waa mid ka mid ah ficillada ugu badan ee la soo dejiyey iyo ciyaaraha arcade ee dukaanka, oo leh in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah, qiimeyn 4.6-xiddig leh iyo in ka badan 1 faallooyin iyo ra'yi togan.
Seef Of Xolan
Haddii aad jeceshahay ciyaaro leh sawir gacmeedyada 'Pixel Art', waad jeclaan kartaa midkan, maxaa yeelay waxay leedahay xoogaa muuqaallo muuqaal ah oo dib kuugu celinaya waqti markii ciyaaraha miisaska kumbuyuutarradi ugu horreeyay ee suuqa ay la socdeen mowduucan marka la eego sawirka xilligaa .
Si aad ula xiriirto sheekada iyo dabeecadda ciyaarta, waxaa xusid mudan taas Xolan waa nin dhalinyaro ah oo leh mabaadi’da iyo himilooyinka ku dhiirrigeliya inuu u dagaallamo caddaaladda iyo camalka wanaagsan. Waa inaan ka caawinaa dabeecadan wanaagsan safarka ciyaarta iyo adduunyo badan iyo heerarkiisa si nabad iyo caadi u soo noqoto sidee adduunyadiisu ahayd bilowgii, maxaa yeelay sharku waa xukumaa. Dabcan, waxay leedahay adduunyo iyo heerar badan oo aan ku khasbanaan doonno inaan ku guuleysano si aan u gaarno himiladan.
Waxaa jira cadaw badan iyo dhibaatooyin kuwaas oo isku dayi doona inay Xolan lumiyaan, cadawguna runtii way adag yihiin, iyagoo waliba ah kuwa ugu adag ee laga adkaado dhamaadka aduunka. Dabeecaddu waxay adeegsan kartaa awoodo aan caadi ahayn waana inay sidoo kale dhammaystirto guulaha qaarkood si ay u caddeyso inuu isagu yahay feejignaanta ugu fiican dhammaan.
Ciyaartaani waxyar ayey ka duwan tahay ciyaar kasta oo madal hore loo yaqaanay, maadaama ay soo bandhigeyso firfircooni asal ah oo asal ah. Si kastaba ha noqotee, wali waa cinwaan si buuxda ugu hoggaansamaya sifadan, taas oo ah sababta aan ugu darnay qoraalkan soo uruurinta.
Badland waa mid ka mid ah kulamada ugu fiican qaybteeda, Lagu abaalmariyo marar badan oo ah mid ka mid ah cinwaannada ugu xiisaha badan ee indie oo dhan. Xaqiiqdii, inta udhaxeysa sanadaha 2012 iyo 2013, waxay ahayd guuleyste abaalmarino sida PAX, SCEE of Game Connection Europe iyo Nordic Indie Sensation Award at the Nordic Game.
Goobaha ciyaartan ayaa runtii soo jiidasho leh, iyadoo hawdka, keynta iyo hal abuur badan oo xayawaan ah ay yihiin waxyaalaha gacan ka geysta khibrad garaafadeed oo aan cidna la mid ahayn. Halkan waa inaad duulista tagtaa oo aadan socon, orod ama boodbooyin sida ugu badan ee ciyaaraha madasha ee dukaanka.
Kaymaha Badland wax aad u yaab badan ayaa ka dhacaya waana inaad soo ogaataa waxay tahay, laakiin maaha inaad ka fogaato dhammaan caqabadaha, dhibaatooyinka iyo caqabadaha aad kala kulmi doonto safarka adduunkan dahsoon. Waad ku ciyaari kartaa qaab kali ah, laakiin sidoo kale waxaad leedahay qaab ciyaartoy badan oo aad la jaan qaadi karto seddex saaxiibbo kale oo aad ku raaxeysan karto ciyaarta xitaa si ka wanaagsan. Waxaa jira in kabadan 100 heerar oo kaladuwan oo lagaa rabo inaad iska ilaaliso caajiska. Si la mid ah, waxaad leedahay tifaftire heer, si aad ugu ciyaari kartid markasta oo aad rabto iyo, haddii aad rabto, la wadaag.
Ciyaartan waxay caan ku tahay Google Play Store, in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah oo la soo uruuriyay tan iyo markii la bilaabay 10 sano ka hor, qiimeynta xiddigta 4.5 iyo in ka badan 1 milyan oo faallooyin togan ah. Waa ciyaar madal mudan in la isku dayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 5-ka kulan ee ugu fiican madal Android
Top 10 Ciyaaraha Anime ee loogu talagalay Android